Misavoritaka… vao mainka manaparitaka pesta | NewsMada
Ady amin’ny pesta izao… Tsy hita be ihany. Nahoana? Na eo aza ny ezaka etsy sy aroa, mandeha ihany ny resaka eny rehetra eny. Eo, ohatra, ny fanazavana na karazana tolokevitry ny mpitsabo sasany: ady eo anivon’ny fiarahamonina no tokony hatao sy himasoana, fa tsy ady any amin’ny hopitaly.
Ny mpitsabo no tokony hantsoin’ny marary na izay ahiahina, ary tsaboina amin’ny toerana voafaritra misy azy: fizahana sy fitsaboana marary, fandrarahana fanafody… Fa tsy ny marary no entanina hamonjy toeram-pitsaboana: vao mainka manely valanaretina eny an-dalana mandra-pahatonga any.
Eo ihany koa, ohatra, ny fanentanana ny mbola tsy marary tsy mari-koditra hitandrin-tena: fitandroana mandrakariva ny fahadiovan’ny tena sy ny manodidina, fanatonana na fiantsoana mpitsabo raha misy ny mampanahy na ahiahina… Tsy latsak’izany koa ny fanentanana tokony hatao amin’izay manana ny maty.
Tsy ampy izay fanentanana ny amin’ny manana ny maty izay? Na noho ny hafenoan-drano be loatra, manao ny tsy fanao ny sasany… Zary fialokalofana ny hoe fomban-drazana, kolontsaina… Efa kolontsaina koa ny tsy fahasahiana milaza ny marina sy izay tokony hatao amin’izay matin’ny pesta?
Misy hatrany ny mamongatra ny maty hoe ahina ho very, raha alevina avy hatrany amina toerana manokana. Ao ny mbola mikirakira sy mikarakara ny maty tsy misy na tsy ampy fitandremana sy fiarovan-tena. Tsy fahalalana no antony? Na tsy fahampian’ny fampahalalan’ny tomponandraikitra…
Zava-doza: raha iray no maty, mety ho maromaro ny hifindran’ny aretina amin’ny fikarakarana sy fikirakirana ny maty… lasa famonoana ny velona. Miara-dalana amin’izany ny tsy fahampian’ny fanazavana any ambanivohitra lavitra momba ny aretina, ny fitandreman’ny tsirairay, ny atao amin’ny maty…
Mandeha koa ny resaka ny amin’ny fisian’ny taratasy hosoka fahazoan-dalana mitondra razana etsy sy eroa. Iza no tomponandraikitra? Izay ilay hoe samy manana ny andraikitra tandrify azy avy. Anisan’ny mety mbola vao mainka manaparitaka pesta izany karazana fisavoritahana rehetra izany?